Star Wars သည်ထာဝရပျက်စီးသွားနိုင်သည် - BGR - TELES RELAY
Star Wars သည်ထာဝရပျက်စီးနိုင်သည်
By Tele RELAY တစ်ခု On ဒီဇင်ဘာလ 20, 2019
ဤတွင်လူတိုင်းမှအများဆုံးကြည့်ရှုနိုင်ဆုံးပြပွဲ ၁၀ ခု ...
ဤသည်မှာနောက်ဆုံးတွင်ကျွန်ုပ်တို့၏မေးခွန်းများကိုဖြေဆိုပေးမည့်အံ့ show ဖွယ်ရာပြပွဲဖြစ်သည်။
ယိုစိမ့်နေသောရုပ်မြင်သံကြားစီးရီး "Falcon" မှဗွီဒီယိုတစ်ခုက…
Star Wars: Skywalker ၏ထ ဒီတနင်္ဂနွေထွက်သွား။ နှင့် Star Wars ပရိတ်သတ်များသည်အသစ်သော trilogy ပာနှင့် Skywalker Saga တစ်ခုလုံးမည်သို့အဆုံးသတ်သွားသည်ကိုကြည့်ရှုရန်ပြဇာတ်ရုံများသို့အကြီးအကဲများပါ ၀ င်မည်။ မြင်ပြီ Skywalker ၏မြင့်တက်မှု, သူ၌သူသည်အခြားသူများနှင့်မတူအောင်ထူးခြားသည့်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ကောင်းသောမြင်ကွင်းများများစွာရှိသည်ဟုသင်ယုံကြည်စိတ်ချစွာဖြင့်သင်ပြောပြနိုင်သည် Star Wars ရုပ်ရှင်တွေ။ ပန်ကာ ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်ယခင်ရုပ်ရှင်များမှသတိပေးချက်များကိုသတိပြုမိစရာမလိုတော့သည့်အချိန်များစွာရှိသည်။ ကံမကောင်းစွာပဲ၊ Skywalker ၏ထ မရှိမဖြစ်ရုပ်ရှင်, ဒါမှမဟုတ်ပင်ထိပ်မှာ Star Wars ရုပ်ရှင်။ ပျက်စီးခြင်းသာမကဘဲကြီးမားသောပြthatနာရှိသည် Skywalker ၏ထမူရင်း Star Wars ရုပ်ရှင်တွေ။ ပြီးတော့မှားယွင်းတဲ့အကြောင်းပြချက်တွေအားလုံးကိုလုပ်တယ်။ အာရုံစူးစိုက်မှု အများအပြားအဓိကဖျက်လိုဖျက်ဆီးအောက်တွင်လိုက်နာပါသင်မြင်သည်အထိသူတို့ကိုရှောင်ကြဉ်ပါ Skywalker ၏မြင့်တက် သငျသညျအံ့သြခံရဖို့လိုလျှင်။
ဒီနှစ်မှာအခြား Disney ဇာတ်လမ်းတစ်ပုဒ်ကသက်သေပြနိုင်တဲ့အရာတစ်ခုရှိမယ်ဆိုရင်သူရဲကောင်းရုပ်ရှင်ကိုရိုက်ကူးဖို့သင်လိုအပ်သမျှအားလုံးသည်လျောက်ပတ်သောလူကြမ်းအဖြစ်နှင့်၎င်းတွင်ရှင်းပြနိုင်သည်။ အသေးစိတ်။ ဤသူကား Avengers: နောက်ဆုံးအခြေအနေဟာ အရာသည် Marvel ရုပ်ရှင်စကွဝseenာ၌မမြင်စဖူးအဆင့်ဆင့်မှလောင်းကြေးတွန်း။ ဟုတ်ပါတယ်၊ Avenger များကိုယ်တိုင်လည်းဤနေရာတွင်ပဟေofိ၏အဓိကအပိုင်းဖြစ်သည်၊ သို့သော်စကြာ ၀ toာအားအစီအစဉ်များပြန်လည်ထူထောင်ရန်သူတို့၏အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည့်တိုက်ပွဲမှာစိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းပြီးလူကြမ်းဖြစ်သောကြောင့်အံ့သြဖွယ်ကောင်းသည်၊ မဖြေနိုင်သည့်မေးခွန်းများစွာ Thanos သည် MCU တွင်အကောင်းဆုံးလူကြမ်းဖြစ်ဖွယ်ရှိပြီး Darth Vader ထက်ပင် ပို၍ ကောင်းသောလူကြမ်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်သည်။ ဤသည် Avengers '' စုပေါင်းအားထုတ်မှုကိုပိုမိုရဲရင့်စေသည်။ ဤအရာများအပြင်ပြီးပြည့်စုံသောပယောဂတစ်ခုမှာအရာအားလုံးကိုအတူတကွသိုထားသည့်ကော်ဖြစ်သည်။
စတင်ဖွဲ့စည်းကတည်းက Star Wars သူရဲကောင်းအုပ်စုတစ်စုအကြောင်းဇာတ်လမ်းတွဲတစ်ပုဒ်ကိုရိုက်ကူးခဲ့သော်လည်းမည်သည့်အရာကမျှယဇျပူဇျောစရာမလိုဘဲပိုကောငျးသောအကြိုးအတှကျလုပျဆောငျခဲ့ပွီးအဓိကလူဆိုးကိုအနိုင်ယူခဲ့ရသည်။ ကျွန်တော့်ကိုအဆိုးဆုံးအဖြစ်သို့ရောက်စေသည့် trilogy ပရိယာယ်သစ်တွင်လည်း၎င်းသည်ပြောင်းလဲခြင်းမရှိသေးပါ Skywalker ၏မြင့်တက်မူရင်းရုပ်ရှင်များကိုလည်းပျက်စီးစေနိုင်သည်။
ယုတ္တိဗေဒကိုရှင်းပြရန်အနည်းဆုံးအားထုတ်မှုမပေးဘဲဒစ္စနေးသည် Palpatine နှင့်လူကြမ်းအဖြစ်အရွေးချယ်ခံရန်ရွေးချယ်ခဲ့သည်။ ငါ့ကိုမှားတာမမှားပါနဲ့။ ငါဟာအင်အားကြီးတဲ့အနက်ရောင်အင်အားကြီးမာစတာတစ်ယောက်သင်ထင်သလောက်မြန်မြန်မသတ်နိုင်ဘူးဆိုတဲ့အတွေးကိုဖျော်ဖြေဖို့အဆင်သင့်ပါပဲ။ ကောင်းပြီ၊ သင် Rey မဟုတ်ရင်၊ ဒါကလွယ်လွယ်ကူကူဖြစ်ပုံရတယ်။ သို့သော် Palpatine သည်အရိပ်ထဲတွင်နှစ်ပေါင်းများစွာရှင်သန်နိုင်ခဲ့သလား။ သူသည်လေလံတင်ရန်အဆင်သင့်ရှိသောသန်းထောင်ချီသောလူများကိုကျွန်ခံနိုင်အောင်ဤမျှကြီးမားလှသောစွမ်းအားကိုအသုံးပြုသည်။ အားလုံးရှင်းပြချက်မပါဘဲ?
(ဘက်ပေါင်းစုံ) https://www.youtube.com/watch?v=UhDtFnpNOfE (/ ဘက်ပေါင်းစုံ)
Palpatine ဟာမကောင်းတဲ့လူကြမ်းမဟုတ်ပါဘူး။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူကတရားမျှတမှုမရှိဘူး။ theကရာဇ်မင်းသည်တတ်နိုင်သမျှရိုးရိုးရှင်းရှင်းမည်သို့အသက်ရှင်သည်ကိုရှင်းပြရန်ကြိုးစားမည့်အစား Skywalker ၏မြင့်တက် အဲဒါတွေအားလုံးကိုသင့်အပေါ်မှာထားပါ။ ဖြစ်ပျက်ပြီးနောက်သူမည်သို့ဆက်လက်ရှင်သန်နိုင်ခဲ့သည်ကိုမသိရသေးပါ အဆိုပါ Jedi ၏ပြန်လာ။ အဘယ်သူသည်သူ့ကိုကယ်တင်သနည်း။ အဘယ်သူသည်သူ့ကိုလွတ်မြောက်ရန်ကူညီပေးခဲ့သည်?
Palpatine အသက်ရှင်ကျန်ရစ်နှင့်ပို။ ပို။ နောက်တော်သို့လိုက်သည်။ Palpatine သည်လွန်ခဲ့သောသုံးနှစ်ကျော်ကာလကလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၃၀ ကျော်အသက်ရှင်လျက်ရှိကြောင်း Resistance ကမည်သို့နားမလည်ခဲ့သနည်း။ ကျွန်တော်တို့နှစ်အနည်းငယ်အကြာအကြောင်းပြောဆိုမယ်ဆိုရင်ဒါတွေအားလုံးကအလုပ်လုပ်မှာပါ အဆိုပါ Jedi ၏ပြန်လာ et အင်အား၏နိုးထ။ ဒါပေမယ့်နှစ်ပေါင်း ၃၀ ကြာပြီ။
မင်းကအရိပ်ထဲမှာဘယ်လိုနေလဲ၊ မင်းအသက်ရှင်နေသေးတယ်ဆိုတာဘယ်သူမှမသိဘူး။ အချို့လူများက၎င်းကိုသိလျှင်၎င်းကိုအခြားသူများမည်သို့မပြောပြသနည်း။ Palpatine ကိုတွေ့ကြုံခံစားနိုင်သောလူများအတွက်ထင်ရှားသောရွေးချယ်မှုများမှာလုကာနှင့်လီယာဖြစ်သည်။ သို့မဟုတ်ပါကအရိပ်အမြွက်မရှိပါ အင်အား၏နိုးထ ou နောက်ဆုံး Jedi.
အကယ်၍ ဒစ္စနီသည်ယခင်ရုပ်ရှင်များတွင် Palpatine အီစတာကြက်ဥများကိုမျိုးစေ့လိုက်လျှင်၎င်းသည်ယခုပင်အဓိပ္ပာယ်ရှိလိမ့်မည်။ သို့သော်ထိုသို့ဖြစ်ပျက်ခဲ့ခြင်းမဟုတ်ပါ။ ဒစ္စနေး Palpatine, သူတစ် ဦး ဇာတ်ကောင်ကိုအသုံးပြုခဲ့ကြပုံရသည် Star Wars ပရိသတ်တွေမုန်းချင်ကြတယ် နောက်ဆုံး Jedi နှင့် Rey ပိုကောင်းတဲ့ဘဝပုံပြင်ပေးပါ။ မည်သူမျှ၏သမီးသည်ရုတ်တရက်စကြဝtheာတွင်အထိတ်တလန့်ဆုံးသောလူသား၏မြေးဖြစ်ပြီး၊
စကားမစပ်, ဒီစကြဝinာထဲမှာသတင်းအလျင်အမြန်သွားလာ။ လူအားလုံးတို့သည်လုကာ၊ လီယာနှင့်ဟန်နိုတို့၏ပုံသဏ္ofာန်များကိုအမြဲတမ်းသတိထားမိကြသည်၊ ထို့ကြောင့် Darth Vader နှင့် Palpatine အပါအ ၀ င်သူတို့တိုက်ခိုက်နေသည့်လူကြမ်းများကိုလည်းသတိပြုသင့်သည်။ အကယ်၍ မင်းကအသက်ရှင်နေသေးတယ်ဆိုရင်peopleကရာဇ်မင်းအကြောင်းလူတွေကပြောကြလိမ့်မယ်။ ကျွန်ုပ်တို့ဤနေရာတွင်ရောက်ရှိရခြင်းမှာအကြောင်းအရင်းမှာလွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကသေဆုံးသွားသောကြယ်၏အားနည်းနေသောအရာကဲ့သို့သောလျှို့ဝှက်ချက်ကြီးတစ်ခုကအင်ပါယာကိုအနိုင်ယူရန်ဖွင့်ပေးသောကြောင့်ဖြစ်သည်။ Palpatine သည်ဤနှစ်များတစ်လျှောက်လုံးလျှို့ဝှက်ထားနိုင်မည်မဟုတ်ချေ။ မျက်စိကန်းသောသစ္စာရှိမှုမရှိ။ သူ၏ထောက်ခံသူအချို့သည်သူ၏လျှို့ဝှက်ချက်ကိုမတော်တဆသို့မဟုတ်ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိသစ္စာဖောက်နိုင်သည်။
Image ကိုရင်းမြစ်: Star Wars
အဲ့ဒါကကျွန်တော့်ကိုမယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်ကြီးမားတဲ့ Death Star Destroyers ကိုခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်။ အဲဒါကျွန်တော်သူတို့ကိုခေါ်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားဂြိုလ်တစ်ခုလုံးကိုဖျက်ဆီးနိုင်သောနောက်ဆုံးအမိန့်၏သင်္ဘောများဖြစ်သည်။ ဒီဖျက်ဆီးသူဒါဇင်နဲ့ချီကိုဘယ်လိုဖန်တီးပြီးလျှို့ဝှက်ထားသလဲ။ ရန်ပုံငွေဘယ်ကနေလာတာလဲ လုပ်သားအင်အားဘယ်ကလာသလဲ ပြီးတော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သူတို့မှာတိုက်ခိုက်မှုမှာအသုံးချနိုင်တဲ့အားနည်းချက်တွေရှိနေဆဲပဲ။ ဤဖျက်စီးသူများကိုဗဟိုအမိန့်မရဘဲမိမိဘာသာမမောင်းနိုင်သည့်အချက်မှာလည်းခုခံမှုမရသင့်သောလျှို့ဝှက်ချက်ဖြစ်သည်။ အင်ပါယာသည်သူပုန်များကိုအကြိမ်ကြိမ်လျှော့တွက်ခဲ့သည်၊ ရလဒ်အနေဖြင့်သူတို့သည်ကြီးမားသောရိုက်နှက်မှုများကိုဆက်လက်ပြုလုပ်ခဲ့သည်။
Palpatine တွင်ဝါသနာပါသောနောက်လိုက်များစွာသည်မည်သည့်အကူအညီကိုမဆိုကမ်းလှမ်းရန်အသင့်ရှိကောင်းရှိနိုင်သည်။ သို့သော်သင်ဤစစ်တပ်အမျိုးအစားကိုသင်မည်သို့တည်ဆောက်။ လျှို့ဝှက်ထားသနည်း။ ဘုရားသခင့်မျက်နှာကို ထောက်၍ ဤကြီးမားသောစစ်တပ်ကိုသင်အဘယ်ကြောင့်အသုံးမပြုပါသနည်း Star Wars သက်ကရာဇျစဉျ။ ဤဖျက်စီးသူများအား Rey သည်စုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ဆုံးဖြတ်ချက်မချမီကြာမြင့်စွာကတည်းကပြုလုပ်ခဲ့သည်။
နောက်ဆုံးတွင် Palpatine သည်ထူးဆန်း။ ကြောက်စရာကောင်းပြီးမကျန်းမာသောဂူထဲတွင်အဘယ်ကြောင့်နေရသနည်း။ လူဆိုးတွေကိုကိုယ်စားပြုဖို့ဒီပုံစံကိုကျွန်ုပ်တို့ဘာကြောင့်လိုအပ်နေသေးတာလဲ။ လူတစ်ယောက်သည်အင်အားစု၌လေ့ကျင့်မှုအဆင့်မည်မျှပင်ရှိပါစေ၊ သူ၏ဆရာဝန်ကသူ့ကို Exogol ကိုလှည့်လည်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်သံသယမရှိပါ။ ဆိုလိုတာကဒီကြီးမားတဲ့နောက်ဆုံးအမှာစာတွေကိုသင်တတ်နိုင်ပေမဲ့သတိပညာရှိရှိနေဖို့ပိုကောင်းတဲ့နေရာရှာလို့မရဘူးလား။ အဘယ်ကြောင့်ဤမျှကြီးမားသောနဂါးငွေ့တန်းတစ်ခုဖြင့်လျှို့ဝှက်ထားရသည့်အထူးနေရာများသို့သာသင်ပုန်းခိုရန်အထူးသံလိုက်အိမ်မြှောင်လိုအပ်သနည်း။
သင်မည်မျှပင်လည်ပတ်ပါစေ Palpatine ၏တည်ရှိမှုနှင့်တစ်နေ့တာအလုပ်သည်အဓိပ္ပါယ်မရှိပါ Star Warsအထူးသဖြင့်ဒုတိယ (မူရင်း) နှင့်တတိယအကြားနှစ်ပေါင်း ၃၀ အတွင်းဖြတ်သန်းသွားခြင်းကိုစဉ်းစားသည် Star Wars Trilogy ။ ထိုအခါ Palpatine ၏ရှေ့မှောက်တွင်တစ်ခုလုံးကိုသက်ရောက်သည် Skywalker ၏ထ ပုံပြင်။
အများပြည်သူလက်ခံသည့်နည်းဖြင့်လူကြမ်းအဖြစ်ကိုရှင်းပြနိုင်ခြင်းသည်အရာအားလုံးကိုပျက်စီးစေသည်။ Rey ဟာငါတို့ဂရုစိုက်တဲ့တစ်ခုတည်းသောသူရဲကောင်းဖြစ်လို့သူဟာဇာတ်ကောင်ရဲ့မုတ်သုံ ၀ င်အစိတ်အပိုင်းတွေကိုတောင်ပျက်စီးစေတယ်။ ဒီဇာတ်လမ်းထဲမှာဖင်၊ ဖိုးနဲ့ရို့စ်တို့အကြောင်းပြောပြတဲ့ဇာတ်လမ်းတွေရှိကောင်းရှိနိုင်ပေမဲ့သူတို့အားလုံးဟာတကယ်မလိုအပ်တဲ့ဇာတ်ကောင်တွေကိုထောက်ပံ့နေပုံရတယ်။ ဒါ့အပြင် Palpatine ကလူဆိုးဖြစ်နေလို့နောက်ပြန်တိုက်ခိုက်နေတာလို့ထင်ခဲ့တယ် အဆိုပါ Jedi ၏ပြန်လာသူ၏အံ့အားသင့်ဖွယ်နိုးထမှုသည်မူရင်းခံယူချက်ကိုပျက်စီးစေသည်။ အခုတော့ပထမဆုံးရုပ်ရှင်တွေကိုမကြည့်နိုင်တော့ဘူး၊ Palpatine သေဆုံးမှုဟာအမြဲတမ်းစိတ်ပျက်စရာလှည့်ကွက်တစ်ခုလို့ငါမထင်ပါဘူး။
Image ကိုရင်းမြစ်: ဒစ္စနေး
Françoise Hardy ကိုဆေးရုံတင်ခဲ့ရသည်လား။ ဆွေမျိုးများကသူမအားကုသမှုခံယူနေကြောင်းငြင်းဆို
FALLY IPUPA, အကအရင်းအမြစ် - ဗီဒီယို
ယခုသီတင်းပတ်အတွင်း Netflix တွင်လူအများစုကြည့်ရှုနိုင်ဆုံး ၁၀ ပွဲ ...
ဤသည်သည်“ Endgame” ပြီးနောက်ကျွန်ုပ်တို့၏မေးခွန်းများကိုနောက်ဆုံး၌ဖြေကြားပေးမည့်အံ့ show ဖွယ်ရာပြပွဲဖြစ်သည်။
ယိုစိမ့်နေသော“ စွန်ငှက်” ရုပ်မြင်သံကြားဇာတ်လမ်းတွဲမှဗီဒီယိုတစ်ခုသည်အဓိကဖျက်ဆီးသူများကိုဖော်ပြသည်။
Prequel စီးရီး "Beauty and the Beast" သည် Disney + - BGR သို့ရောက်ရှိသည်